Imboni Yezindondo - Abakhiqizi Nabahlinzeki Bezindondo baseChina
Izindondo ziyindlela ejabulisayo yokuklomelisa izimpumelelo ezifundweni. Siphethe umugqa ogcwele wezindondo zempumelelo ozenzeka ngokwezifiso ezizokwenza kube nemiklomelo emihle kubafundi bakho kulo nyaka. Bahalalisele ngomsebenzi owenziwe kahle ku-spelling bee, noma ubathumele ngesitayela nokuziqhenya ngokuthweswa iziqu. Siphatha izindondo cishe kuyo yonke imicimbi yezemfundo.
Izindondo ze-DCM Decagon ziletha umumo we-decagon wakudala onesithombe sesimanjemanje. Akhiwe ngama-alloys ensimbi anombala omnyama, zonke izindondo ze-DCM zikala u-2″ ububanzi, futhi zinemibala egqamile egcwalisa umfanekiso okhazimulayo.
UBUCHULE LWETHU: Abakhiqizi bezindondo basekela Indondo nebhokisi lokupakisha ekwakhiweni kwakho. Sinikeza isiqinisekiso sekhwalithi esingu-100%. Uma ukukhiqizwa okungalungile, sizokubuyisela imali, noma sikwenzele kabusha imikhiqizo ngokushesha. Sicela ukhululeke ukufaka i-oda lakho. 100% I-Eco friendly, Ayinangozi, Imali yokubuyiselwa kwendondo yemali engenabo ubuthi esimweni sekhwalithi embi Ubuningi:PCS 100 200 300 500 1000 2500 5000 Isuka ku-: $2.25 $1.85 $1.25 $1.15 $0.90 $0.80 $0.8 $.
Izimpumelelo zangempela kufanele zinikezwe ukuqashelwa okufanele. Izindondo zethu zekhwalithi ephezulu ze-bespoke zisho okuningi kakhulu kunobuningi obukhiqizwayo, ngaphandle kwezinketho zeshalofu.
Engeza umklamo wakho, izinombolo ezilandelanayo kanye nombhalo oyisikhumbuzo ezindondoni ukuze uqinisekise ukuthi ngayinye ihlala iyisipho esiyingqayizivele nesikhethekile.
Itholakala kunoma imuphi umumo, usayizi noma idizayini enokulungiswa kweluphu ongayikhetha yeribhoni lentamo, nokuqedwa kwegolide, isiliva nethusi.